၈ လက်မအရွယ် အသေးငယ်ဆုံး Gaming Console ကို မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Alienware - PX
လက်ရှိ Las Vegas မြို့မှာ ကျင်းပပြုလုပ်နေတဲ့ CES 2020 (Consumer Electronics Show) ပြပွဲကြီးမှာ Windows ကွန်ပျူတာတွေရဲ့ အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်လာမယ့် Gaming Console နမူနာကို ပြသလိုက်ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျွမ်းကျင်သူတွေက ၈ လက်မအရွယ် UFO Concept ကို Windows PC တွေရဲ့ Portable အဖြစ်ဆုံး Console လို့ ပြောဆိုထားပြီး အဆိုပါ Device ဟာ Mortal Kombat 11 နဲ့ Rocket League ဂိမ်းတွေကို အထစ်ငေါ့်မရှိ ကစားနိုင်တာ တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။
ဒါကြောင့် တန်ဖိုးမြင့် Gaming Laptop အသုံးပြုသူတွေအနေနဲ့ ၈ လက်မအရွယ် ဂိမ်းစက်ထဲမှာ ဘယ်လို Hardware မျိုး ထည့်ထားသလဲ စိတ်ဝင်တစားဖြစ်ခဲ့ပြီး ရေပန်းစားနေတဲ့ Nintendo Switch နေရာကို အစားထိုးလာမယ့် Smallest Console လို့ သုံးသပ်နေကြပါတယ်။
The Verge သတင်းဌာနမှာ ဖော်ပြထားချက်အရ အမည်မသိယာဥ် (UFO – Unidentified Flying Object) ဟာ 1200 Pixel (1920 x 1200) Resolution အသုံးပြုထားပြီး Windows PC တွေလို Processor ၊ Graphics နဲ့ Battery စတဲ့ Component တွေ အားလုံးပါဝင်ပြီး Switch ထက် ၃ ဆ (၂ ပေါင် သို့ ၀.၉ ကီလိုဂရမ်) ပေါ့ပါးတယ်လို့ သိရပါတယ်။
UFO မှာ ချိတ်ဆက် အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Solid Magnetic Controller ၂ ခု ပါဝင်ပြီး အဆိုပါ Controller ၂ ခုကို တခုတည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Joy-Con ချိတ်ဆက်မှု Grip ပါဝင်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် UFO မှာ ထောင်လျက် အသုံးပြုနိုင်မယ့် Kickstand Built-in ပါဝင်သေးတဲ့အတွက် (Nintendo စတိုင်) Display ထောင်ထားပြီး Controller ကို သီးသန့် ကိုင်ကစားနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
တခြား ချိတ်ဆက်မှုအပိုင်းအတွက် UFO မှာ USB-C Port ၂ ခုပါဝင်ပြီး အားသွင်းဖို့နဲ့ Keyboard ၊ Mouse အစရှိတဲ့ ချိတ်ဆက်မှု အားလုံးကို Windows မှာ အသုံးပြုတဲ့အတိုင်း ချိတ်ဆက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
UFO ကို ကိုင်တွယ်အသုံးပြုသူ အတွေ့ကြုံအရဆိုရင်တော့ ဂိမ်းဝင်တာ ၊ Application ဖွင့်တာကအစ Standard Windows ပုံစံဖြစ်တာကို Rocket League ၊ Mortal Kombat 11 ဂိမ်းဝင်ရင် Steam Launcher က တဆင့် သွားရတဲ့ Experience ကို ဝေမျှေခဲ့ပါတယ်။
Graphics အပိုင်းမှာ PC ကြီးတွေလောက် ကောင်းတယ်မဆိုသာပေမယ့် Switch မှာ Downgrade လုပ်ထားတဲ့ Graphics ထက် ပိုကောင်းတယ်လို့လည်း The Verge မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ဒါကြောင့် Area51 လို Switchable Graphics Card အသုံးပြုနိုင်တဲ့ Gaming Laptop ထက်စာရင် လက်ထဲမှာလည်း ကိုင်ရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါးရှိလှတဲ့ UFO Concept ဟာ ကြည့်ရှုသူတွေကို မေးခွန်းများစွာနဲ့ ချန်ရစ်စေပါတယ်။
အမေးများဆုံးထဲကမှ ကောက်နှုတ်ပြရင် UFO Concept ကို Product အစစ်အနေနဲ့ မြင်ရနိုင်မလား? တကယ်လို့သာ Alienware အနေနဲ့ အကောင်ထည် ဖော်နိုင်ရင် PC Gaming လောကဟာ လက်ရှိ အနေထားထက် ပိုကြီးထွားလာမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်တစ်ချက်က UFO မှာ ဘာ Processor နဲ့ Graphics Card ကို အသုံးပြုထားလို့ Switch လို Performance Issue မရှိတာလဲ? ဒါနဲ့ဆက်စပ်လို့ ဘက်ထရီ သက်တမ်းကရော Nintendo Platform လောက် အားခံရဲ့လား အစရှိတဲ့ မေးခွန်းတွေကို Alienware လက်ခံခဲ့ပေမယ့် ဖြေကြားဖို့ ငြင်းဆန်ခဲ့ပါတယ်။
ဒုတိယ မေးခွန်းက လူတိုင်း စိတ်အဝင်စားဆုံး မေးခွန်းဖြစ်ခဲ့သလို UFO ကို မောင်းနှင်ထားတဲ့ Devil Driver ဘယ်သူလဲ?
Red Dead Redemption2လို ဘယ် Graphics Card မှ 1080p မှာ 60fps မကစားနိုင်တဲ့ Powerful ဂိမ်းတွေ ရှိနေသရွေ့ UFO ရဲ့ Performance Meter ကို ဘာ Gear နဲ့ ကိုင်တွယ်မလဲ?
အရေးကြီးဆုံး အပိုင်းကတော့ Gaming Laptop တွေရဲ့ အကြီးမားဆုံး အားနည်းချက်ဖြစ်နေတဲ့ Cooling Factor ကိုရော ဘာနဲ့ ကိုင်တွယ်မလဲ အကြောင်းပြချက်တွေက UFO Fans တွေ အသိချင်ဆုံး သော့ချက်အဖြစ် CES မှာ ကျန်ရစ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။
Source: TheVerge ၊ CNet
Intel Processor ထက် ၉၀% ပိုမြန်ဆန်တဲ့ Ryzen7Mobile Processor မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ AMD